Ndị na - emepụta ngwaahịa na ụlọ ọrụ - ndị na - emepụta ngwaahịa na China
Ofkpụrụ Artron COVID-19 IgM / IgG Antibody Nnwale bụ nnwale nnweta immunochromatographic maka nchọpụta oge na nchọpụta ọdịiche dị na nje IgM & IgG na nje COVID-19 na ọbara mmadụ, plasma, ma ọ bụ ihe nlele ọbara.
Garant ịwa ahụ
Enwere ike iji ya rụọ ọrụ ịwa ahụ na ọgwụgwọ onye ọrịa.Ibelata mgbochi na-efe efe na ebe ọha, Mpụcha nke nje mmerụ ahụ; ejiri ya na agha, ọgwụ, kemịkalụ, nchebe gburugburu ebe obibi, njem, mgbochi nje na mpaghara ndị ọzọ.
Aprons na-eguzogide mmiri, mmanu mmanu na mmanu. .Mepụta nhazi, ịma mma, imepụta, ewu na ịdị ọcha & ojiji kwa ụbọchị.
Isolation Genti PE1003B
Laboratory, kichin, ụdị mpaghara niile chọrọ nchebe mmiri na-agaghị agakọ.
Ihe nchoputa nke mmiri, ihe nkiti, ihe banyere mmanu
A na-eji ya na ndụ kwa ụbọchị. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ n’ụlọ ọrụ, kichin, ụzọ mmiri ozuzo, oriri na ọ ,ụ etc.ụ, nzukọ wdg. Ngwadogwu oke nchekwa nchekwa nchekwa ihu ihu, bụ nke a na-ahụkarị na ụlọ akụ, ndị ọrụ ụgbọ njem, ụlọ oriri na ọ publicụ publicụ; gbochie onye ọrụ ịkwanye mmiri na-emetọ ihe na ndụ kwa ụbọchị na ọrụ. N'otu oge ahụ, ọta ihu nwere ezigbo mgbochi arụmọrụ ma na-enye ọhụụ doro anya.
Isolation Koodu PE1003
Laboratory, kichin, ụdị mpaghara niile chọrọ mgbochi mmiri na-egbochi ọfụma.Water-proof, Dust-proof, oil-proof
Iwepu Obodo E
Disposable mwepu uwe
Iwepu Obodo A
Site na mpempe akụkụ abụọ kechiri akụkụ atọ na eriri na-agbanwe gburugburu ihu oghere, hood ahụ nwere ike ịkawanye ọdịdị nke ihu ma bulie mmetụta nchebe.
Ekwentị ： 13969819257
Adreesị ： Ime ụlọ 1009, ụlọ azụmahịa China, No.100 Hongkong middle way, Qingdao, China
Ndụmọdụ - Ngwaahịa dị ọkụ - Ebe nrụọrụ - AMP Mobile
Uwe ọgwụ A na-atụfu, Mmiri Proof, Mmiri Proof Hdpe Apron, Uwe Nchedo, Dust-Proof Pet Face Shield, Gowns chebe ya,